Banaanbax Ka Socoda Magaalada Muqdisho – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Banaanbax Ka Socoda Magaalada Muqdisho
Banaanbax Ka Socoda Magaalada Muqdisho
Wadayaasha gaadiidka dadweynaha qaada ee BL-ka ayaa saakay dhigaya banaanbax ay uga cabanayaan lacago fara badan oo sida ay sheegeen ay ku soo rogtay dowladda fedraalka Somalia.
Boqolaal ka mid ah wadayaasha gaadiidka BL-ka ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyada oo ay iskugu soo baxeen Isgooyska Afarta Jardiino ee magaalada Muqdisho,iyada oo ay xireen qeyb ka mid wadadaas oo muhiim u ah isu socodka.
Xirnaashaha wadooyinka iyo lacag 100-kun oo shiln Somali ah oo lagu soo rogay ayay tilmaameen in ay aad uga xunyihiin isla markaana aysan bixin karin waxaana ay baaq u direen dowladda fedraalka Soomaaliya.
Sidoo kale darawalada gaadiidka ayaa sheegay in horay ay u qabeen dhibaatooyinka waddooyinka xiran ee magaalada, haatan loogu sii daray lacago dheeraad ah oo canshuur ahaan lagu soo rogay.
Waddooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho ayaa xiran muddo dhowr bilood ah iyada oo aanan jirin gaadiid isku gudbi kara degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho
Madaxda dowladda Federalka Somaliya ayaa waxa ay ka codsadeen inay ka shaqeeyaan sidii dhibaatadaasi looga dulqaadi lahaayeen, maadaama Sarkaal Ciidan oo ka tirsan Saldhiga Degmada Boondheere caqabadaasi uu ku haayo.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay qaraxii xaley ka dhacay Muqdisho
Next articleAfkaar “Romantic” ah oo Qurxineysa Nolosha Qoyska Jacaylkana Adkeynaysa
Faahfaahin: Qarax ka dhex dhacay xarunta gobolka Banaadir iyo Yariisow oo...